Spring Break at Amakolishi eWashington ngo-2018
I-united states Washington
Abafundi, abavakashile, kanye nothisha bafuna ukuphumula njalo ngonyaka uma isimo sezulu siqala ukufudumala futhi amakilasi aphuma emva kokuhlolwa okuphakathi kokucindezeleka.
Kungakhathaliseki ukuthi ufuna ukuya eWashington ukuthola amaholide aphumule futhi ufuna ukuhlola lapho abantu bazobe bephuma ngokugcwele amandla noma uya ekolishi eWashington futhi ufuna ukuhlela iholidi lakho, uzofuna ukwazi ukuphumula kwentwasahlobo kwenzeka kuhulumeni .
Ngo-2018, amakholeji amaningi emayunivesithi aseWashington azogubha ukuphumula kwawo kwentwasahlobo phakathi nango-Mashi nangaphambi kuka-Ephreli, nakuba abanye abaphuthumayo bephumula ngoFebhuwari noma ngoMeyi. Qinisekisa ukuthi uhlole ihhovisi lombhalisi ekolishi ngalinye ukuqinisekisa izinsuku njengoba izinguquko ezingalindelekile zingenzeka.
Izinsuku Zokuphumula Zase-Washington State Zonyaka ka-2018
Kumakolishi amaningi namanyunivesithi aseWashington, amakilasi ngeke ahlanganyele phakathi nezinsuku ezibalulwe ngezansi, kodwa amahhovisi esikoleni angase avulekele. Hlola ikhalenda egcwele yezemfundo yesikole ngasinye ngolwazi oluthe xaxa ngokuvalwa nokunye kwamaholidi esikoleni.
I-Bastyr University: Mashi 16 kuya ku-Ephreli 9, 2018
I-University of Central Washington: Mashi 16 kuya ku-27, 2018
City University of Seattle: March 29 kuya ku-Ephreli 1, 2018
I-Cornish College of the Arts: Mashi 10 kuya ku-18, 2018
I-DeVry University: April 22 kuya ku-29, 2018
University of Eastern Washington: Mashi 23 kuya ku-Ephreli 1, 2018
I-Evergreen State College: Mashi 23 kuya ku-Ephreli 1, 2018
IGonzaga University: Mashi 10 kuya ku-18, 2018
I-University University, iToppenish: Mashi 3 kuya ku-11, 2018
I-Matteo Ricci College: Mashi 23 kuya ku-Ephreli 1, 2018
I-Northeastern University, Seattle: Mashi 3 kuya ku-11, 2018
Northwest University, Kirkland : Mashi 3 kuya ku-11, 2018
I-Pacific Lutheran University: Mashi 23 kuya ku-Ephreli 1, 2018
Isikole se-Presidio Graduate: March 23 kuya ku-Ephreli 1, 2018
University of St. Martin, Lacey: Mashi 10 kuya ku-18, 2018
Seattle Bible College: Mashi 20 kuya ku-25, 2018
I-Seattle Pacific University: Mashi 17 kuya ku-24, ngo-2018
I-University of Puget Sound: Mashi 10 kuya ku-18, 2018
I-University of Washington: Mashi 10 kuya ku-25, 2018
Walla Walla University: Mashi 22 kuya ku-Ephreli 1, 2018
I-Washington State University: Mashi 10 kuya ku-18, ngo-2018
I-Western Washington University: Mashi 24 kuya ku-Ephreli 1, 2018
I-Whitman College: Mashi 9 kuya ku-25, 2018
University of Whitworth: March 24 kuya ku-Ephreli 1, 2018
Okufanele Ukwenze eWashington for Spring Break
Manje ukuthi uyazi lapho amakholeji neminyunivesithi kahulumeni waseWashington ephuma ngamaholide entwasahlobo ngo-2018, sekuyisikhathi sokuhlela uhambo lwakho. Izindawo zomcimbi zonyaka wale ndawo futhi zingaphandle kombuso ziqinisekile ukuthi zinezinye izenzakalo ezinkulu ezirekhodiwe lapho izindawo zebhajethi zingakusiza ukuba ugweme izimali eziphezulu zokuhamba kwentwasahlobo ngenkathi usazojabula.
Uma ngabe uthanda ukuphuma eWashington ukuze uthole ukuphumula kwentwasahlobo, kunezindawo eziningi ezithandwayo zokuphumula e-United States ezinjengezindiza eHawaii noma ukuthatha uhambo oluya eCalifornia-zombili ezifinyeleleka kalula kusuka eWashington. Uma uhamba edolobheni elisha okokuqala, qiniseka ukuthi uhlela phambili ukuze uqinisekise ukuphepha kwakho ngesikhathi sekhefu .
Ngakolunye uhlangothi, isimo saseWashington sinikeza nemisebenzi eminingi eningi, ama-adventures, nezenzakalo ngesikhathi sokuphumula kwentwasahlobo. Ungasebenzisa amahora angu-48 eSttletle , kanti nakuba kungase kube mnandi kakhulu ukubhukuda, kunamabhishi amaningi eduze nogu lolwandle lwasePacific ukuze ujabulele ngosuku olususentwasahlobo olufudumele.
Imicimbi yeKhisimusi ku Spokane
Umhlahlandlela Wokuhamba WaseSkagit Valley
I-Olympic National Park, eWashington
Idatha Washington Washington Data Data
I-Tulalip Resort ye-Casino Isithombe segalari
Ama-Romantic Getaways e-Washington State
Izindawo eziPhezulu zokuPhepha zokuPhepha zokuPhepha ePhoenix
5 Ezingcono kakhulu ze-Eco-Friendly Tours ongazithatha
Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe Buka Kufakiwe The Only Basilica in Amsterdam: St. Nicholas Basilica
Indlela Yokuthola Ilayisense Yomshayeli We-Washington DC
Isimo Sezulu seDora
I-Parachicos yaseChiapas, iMexico: Ifa leMasiko leBantu
Ukuhlala e-Quebec Ice Hotel
Izinto Okuzokwenziwa E-Crescent City, California
Amathiphu okuhamba ngebhizinisi eRussia
I-England Ezingqungquthelweni Zokuvakasha Eziphezulu Nokuqondiswa
Izindawo ezihamba phambili zokuhamba nge-tubing eseduze nase-Austin
Hambisa ngaphezulu, iLabhulali yasekhaya: Isifundo kulezi zitolo zokudlela ze-North Jersey ze-Coffee Jersey
Indawo yase-Fairfax yaseCleveland